Telefoonada qalabka iyo qalabka kale | January 2020
Khalad "Shabakad aan la aqoon oo aan helin internetka" ... Sidee loo hagaajiyaa?
Editor Ee Doorashada January 20,2020
Ugu Weyn Ee Telefoonada qalabka iyo qalabka kale
Telefoonada qalabka iyo qalabka kale
Sida loo xoqdo Fly IQ445 smartphone
Inta badan mulkiilayaasha smartphone ee Fly IQ445 Genius ugu yaraan hal mar ayaa ku fikiray ama ugu yaraan maqashay suurtagalnimada in ay dib isku soo celiyaan Android OS qalabka si ay u soo celiyaan awooddeeda shaqeynta, ballaariso shaqeynta, soo bandhigto wixii horumar ah ee software nidaamka. Maqaalkani wuxuu kuugu soo bandhigayaa guudmar ku saabsan qalabka iyo hababka lagu deminayo nooca cayiman ee loo heli karo isticmaalka qof kasta, oo ay ku jiraan kuwa aan khibrad lahayn ee ka shaqeynaya nidaamka nidaamka nidaamyada qalabka mobile, isticmaalaha.
Sidee loo kaydiyaa aaladaha Android ka hor inta aanad dhicin
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala qalabyada Android ayaa ogaanaya in tijaabooyinka ay ku jiraan qalab, rakibaadda darajooyin kala duwan iyo sixitaanada badanaa waxay keenaan qalfoofka qalabka, kaas oo la goyn karaa oo keliya iyada oo la rakibayo nidaamka nadiifka ah, geeddi-socodkuna wuxuu nadiifin dhamaystiran dhammaan macluumaadka xasuusta.
Qalabaynta iyo dayactirka ASUS RT-N12 VP (B1) router
Router kasta wuxuu ku shaqeeyaa shaqadiisa sababtoo ah isdhexgalka laba qaybood ee qaybaha: qalabka iyo barnaamijka. Haddii aanay suurtogal ahayn in lagu farageliyo qalabka farsameed ee qalabka loogu talagalay isticmaale joogta ah, markaa qalabka caanuhu si fiican ayuu u fiicnaan karaa oo xitaa waa inuu u adeegaa milkiilaha router si madaxbannaan.
Dooro MIUI qalabkaas
Soo saaraha casriga ah iyo qalabyo badan oo kale Xiaomi ayaa maanta loo yaqaan dhammaan taageerayaasha qalabka Android. Dad badan ayaa ogyihiin in guusha ay gaartay guusha Xiaomi aysan ku bilaabin wax soo saarka qalab isku dheelitiran, laakin horumarinta qalabka isgaarsiinta ee MIUI. Ka dib markii uu helay sumcad wakhti hore, shelladu weli wali waxay dalbaneysaa xalal khaas ah oo la adeegsanayo MIUI oo ah OS-da casriga ah iyo kiniiniyado kala duwan.
Qalabka xajmiga ee Meizu M2 Mini
Inta badan Samsung casriga ah waxaa lagu gartaa nolol aad u dheer adeega sababtoo ah tayada sare ee qaybaha qalabka loo isticmaalo ee soo saaraha. Xataa ka dib sanado badan oo qaliin ah, xaaladaha intooda badan, qalabku wali waa farsamo ahaan, qaar ka mid ah cabashooyinka dadka isticmaala waxaa sababi kara oo keliya qeybtooda software.
Beddelidda iyo soo celinta casriga ah HTC Desire 516 Dual Sim
HTC Desire 516 Dual Sim waa casriga oo, sida qalab badan oo Android ah, ayaa loo isticmaali karaa siyaabo badan. Dib-u-habeynta nidaamka nidaamka waa shuruud aan aheyn mid ka mid ah mulkiilayaasha moodada. Nidaamyadani waxay suurtogal u tahay inay "cusboonaysiin" qalabka barnaamijka ah iyo sidoo kale guul iyo guul leh, iyo sidoo kale dib u soo celinta waxqabadka lumay sababtoo ah guul darrooyinka iyo khaladaadka.
Qalabka xajmiga Firfircoon ee Meizu M3 Mini
Ku rakibida darawalada for firmware Android
Laga bilaabo bilowga qalabka Android, marka hore waxaad u baahan tahay inaad daryeesho hababka diyaarinta. Tani waxay u oggolaan doontaa habka loo qoro qaybaha barnaamijyada loo baahan yahay qalabka si dhakhso ah iyo waxtar leh ee suurtogalka ah, waxaana sidoo kale ka dhigi doonaa suurtogalnimada in laga fogaado khaladaadka soo celin doona habsami u socodka. Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan marka la shaqeynayo barnaamijka qalabyada Android iyada oo loo marayo codsiyada khaaska ah ee Windows-ka ah waa rakibidda "darawallada" qalabka.
Firfircoonida qalabka Android Samsung iyada oo loo marayo barnaamijka Odin
Inkasta oo heerkul sarreeya ee qalabyada Android ay soo saaraan mid ka mid ah hoggaamiyayaasha suuqa adduunka ee kombiyuutarada casriga ah iyo kumbuyuutarrada - Samsung, dadka isticmaala ayaa inta badan ka baqaya suurtagalnimada ama daruuriga ah ee ku shaqeeya qalabka. Si loo isticmaalo qalabka Android-Samsung, xalka ugu fiican ee lagu maareyn karo software-ka iyo soo kabashada waa barnaamijka Odin.
Faahfaahin loogu talagalay qalabka Android oo ku saleysan MTK via SP FlashTool
Mashruuca MTK ee aasaaska u ah dhismaha casriga casriga ah, kombiyuutarada kiniinka iyo qalabyada kale ayaa noqday mid aad u baahsan. Iyadoo la adeegsanayo qalab kala duwan, dadka isticmaala waxay kala dooran karaan kala duwanaanshaha Android OS - tirada rasmiga ah ee rasmiga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee loogu talagalay qalabyada caanka ah ee MTK waxay gaari karaan dhowr darsin!
Qalabaynta iyo dayactirka TP-Link TL-WR841N
Waxqabadka router kasta, iyo sidoo kale heerkiisa waxqabadka iyo qiyaasaha hawlaha loo heli karo dadka isticmaala, waxaa lagu go'aamiyey ma aha oo kaliya qaybaha qalabka, laakiin sidoo kale adware (qalabka software) lagu dhejiyo qalabka. Si ka yar qiyaasta qalabka kale, laakiin weli qaybta software qaybta router kasta waxay u baahan tahay dayactir, iyo mararka qaar soo kabashada ka dib guuldarooyin.
Xanuunka Mi4c smartphone
Qalabka casriga ah ee Xiaomi Mi4c, oo la sii daayay dhamaadkii sannadka 2015, sababtoo ah sifooyinka sare ee tiknoolajiyadda waa dalab aad u qurux badan maanta. Si buuxda loo furo awooda qalabka, dadka isticmaala ee ka socda waddankeena ayaa ku qasbanaan doona in lagu dhejiyo qalabka casriga ee MIUI ama xal gaar ah.
Lenovo A6010 qalabka casriga ah
Sii cusbooneysii cidhib-tirka adoo adeegsanaaya habka ZyXEL Keenetic Lite
ZyXEL Habka Keenetic, oo ay ku jiraan nooca Lite, ayaa si weyn u caan ah dadka isticmaala maaddaama helitaanka iyo isdhexgalka si fudud loo fahmi karo, taas oo u ogolaanaysa in la cusbooneysiiyo qalabkaas oo aan lahayn xirfado khaas ah. Qaab-dhismeedka qodobkan, waxaanu si faahfaahsan u tilmaamaynaa habkan. Ku rakibida qalabka kombiyuutarka ZyXEL Keenetic Lite Moodooyinka kala duwan ee ZyXEL, interface ayaa ku dhawaad ​​isku mid ah, taas oo ah sababta loogu rakibo cusbooneysiinta qalabka casriga ah iyo goobaha lagu sameeyo si la mid ah.
La-shaqeeyaha Lenovo IdeaPhone P780
Qalabaynta iyo Soo-kabashada ee ASUS RT-N10 Router
Routers ay bixiso ASUS, waxaa lagu gartaa nolol aad u dheer. Xitaa moodooyinka caadiga ah, oo la sii daayay in ka badan shan sano ka hor, waxay si ku filan u qabsan karaan shaqadooda maanta, laakiin waa inaanan ilaawin baahida soo noqoshada si loo ilaaliyo qalabka qalabka ee maamula qalabka.
IOS iyo MacOS
Dib u eegista Barnaamijka
https://termotools.com so.termotools.com © Telefoonada qalabka iyo qalabka kale 2020